Wararka Maanta: Sabti, Dec 29, 2012-Tahriibayaal Soomaaliyeed oo ku dhintay shil ka dhacay duleedka Magaalada Tripoli ee Xarunta dalka Liibiya
Dadka la xaqiijiyay geeriyooda ayaa waxay isugu jireen lix gabdhood iyo 12 wiil oo dhammaantood dhallinyaro ahaa kuwasoo laba ka mid ah oo rag ah ay u dhasheen dalka Eritrea oo ka mid ahaa dadkii la tahriibinayay, iyadoo sidoo kale saddex ka mid ah dadka ay dhaawacyadu gaareen ay xaaladdoodu khatar tahay.
“Shilka gaari ee ay ku dhinteen tahriibayaasha Soomaaliyeed wuu jiraan, waxaanna leennahay inta dhimatay Allaha u raxmado, inta dhaawaca ahna Allaha caafiiyo,” ayuu yiri danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya, C/qani Wacays oo la hadlay warbaahinta.
Danjiruhu wuxuu hadalkiisa ku daray in tahriibayaasha gaariga la socday ay tiradoodu ahayd 120 ruux, isagoo xusay in dadkii ka badbaaday shilka oo isugu jiray 56 wiil iyo 18 gabdhood la dhigay xabsi ku yaalla magaalada Tripoli ee xarunta Liibiya.
Gabar ka mid ahayd dadkii ka badbaaday shilka oo la hadashay idaacadda VOA-da ayaa sheegtay in lasoo saaray qaybta hoose ee gaariga, qaybta sarena la saaray shamiito fara badan, taasoo ugu dambeyn kusoo duntay halkaasna ay ku dhinteen tahriibayaal badan.
Tahriibayaashan ayaa waxay ku socdeen magaalada Tripoli si ay halkaas uga raacaan doon u socotay dalka Talyaaniga, waxaana shilkan uu noqonayaa kii ugu horreeyay noociisa oo sannadkan ka dhaca dalka Liibiya.
Soomaali fara badan oo tahriib-doon ah ayaa ku sugan dalka Liibiya, kuwaas oo dhibaato badan ka mara sidii ay ku gaari lahaayeen dalkaas, iyadoo intaa kaddib ay doomo ka raacaan xeebaha dalkaas kuwaasoo ay naftooda ku waayeen tahriibayaal badan.